Fandehanana mamakivaky an'i Manhattan aorian'ny curfew miaraka amin'ny COVID-19 sy ny zava-misy momba ny korontana sivily
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fandehanana mamakivaky an'i Manhattan aorian'ny curfew miaraka amin'ny COVID-19 sy ny zava-misy momba ny korontana sivily
Mety hahafinaritra ny mandeha mamaky an'i Manhattan, saingy hafahafa sy mahaketraka ny fitsidihana ny Big Apple.
Ireo mpandroba any Manhattan dia mety hanana andro iray ahazoana tombony. Mba hisorohana an'izany, ny fivarotana marika marika dia manahy ny amin'izay mety hitranga any New York aorian'ny rotaka iray andro. Ny talata ny magazay Fifth Avenue New York dia nandany ny talata niomanana amin'ny rotaka iray hafa taorian'ny fivarotana maro novakiana ny alatsinainy alina.
Betsaka amin'ireo magazay mihaja indrindra ao amin'ny Fifth Avenue no misy an'i Saks, Cartier, Harry Winston, ary Dolce & Gabbana, izay natsangana tamin'ny talata lasa teo hanohitra ireo mpandroba mety hitranga.
Ireo mpamaky eTN dia nitsidika an'i Manhattan io maraina io taorinan'ny nanesorana ny curfew ary nitondra fiara nitety an'i Big Apple. Androany rehefa lasa ny 8 pmcurfew dia nitohy ny hetsika am-pilaminana. Vetivety dia nihetsika ireo manampahefana hanaparitahana azy ireo sy hanaovana fisamborana.
Mametra-panontaniana izy ny amin'ny antony tsy nitateran'ny media azy. Ity ny tatitra tsy voamariny.
Notetezin'ny Repoblika Tseky ny fandraràn'ny dia an'i Alemana, Hongria ary Aotrisy
Orinasa toy ny fanambarana mahazatra amin'ny Andro Fampirantiana eran-tany nataon'i WTM London